Reinosa. Igumbi lokuhlambela eliphindwe kabini ekhaya
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguGrazzia
Kumda womasipala waseReinosa kunye neNestares, ekungeneni kweCampoo Valley, eli gumbi liphindwe kabini kunye negumbi lokuhlambela langasese likhona. Indlu igcina isango kunye neekholamu zeHermitage yaseNª Señora de los Palacios de Bolmir, apho sihlala khona. Kwimizuzu emi-5 ngemoto, siya kuba kwi-Nestares Golf Course, i-7 kumthombo we-Ebro River kunye ne-20 kwi-Ski Skislopes yase-Brañavieja.
Indawo efanelekileyo kubathandi bokuzola.
Okulandelayo ukuya Church of San Francisco, ngendlela eyenza indawo ethulile elide uhamba, le gumbi kabini kunye lokuhlambela ngamnye, zibekwe ngaphandle lokulala kodwa kufutshane kuyo, kunye elukhukweni abantu ababini, ngaphakathi indlu engqongwe engcotyeni ezihonjisiwe ngokhuni, oya kwabelana nathi, ababuki zindwendwe, apho nathi sihlala khona kwaye mhlawumbi kunye nolunye undwendwe, oya kuba negumbi lakhe kunye negumbi lokuhlambela labucala. AyiyoCasa Rural-Hostel ...
Igumbi libekwe kumgangatho wokuqala wendlu, njengawo onke amagumbi okulala, afikeleleka kwizinyuko zomthi.
Kumgangatho ophantsi wendlu, kukho ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo-igumbi lokutyela, kunye negumbi lokuhlala, apho unokonwabela ukufunda nomculo eziko, okanye apho unokuphumla nje emva kosuku lokukhelwa indawo.
Ungonwabela iWifi kuyo yonke indlu.
Awuyi kuba neengxaki zokupaka.
Indawo efanelekileyo kwabo bajonge ukubaleka kwisiphithiphithi sesixeko.
Indlu ibekwe ecaleni kweCawa yaseSan Francisco, indawo ezolileyo kakhulu efanelekileyo yokuhamba ixesha elide, nokuba ngeenyawo, ngebhayisekile okanye ngehashe.
Kwimizuzu nje emibini ukuhamba ngeenyawo, uya konwabela ipaki enotyani obuninzi kwaye umlambo uya kuhamba nawe kuyo yonke indlela.
Ngakolunye uhlangothi, imizuzu elishumi iya kukwahlula kumbindi weReinosa, apho uya kuba nokufikelela kwiibhanki, iikhefi, iivenkile zokutyela kunye neevenkile ezahlukeneyo apho unokuthenga khona iimveliso zasekhaya, kunye nedama lokuqubha likamasipala eliyimizuzu emi-5. ukusuka endlwini.
Umbuki zindwendwe ngu- Grazzia
Uya kuba nenombolo yam yomnxeba yobuqu ngayo nayiphi na imibuzo enokuthi ivele ngexesha lokuhlala kwakho, kunye nokukunika iingcebiso ngendawo yokutya, iindawo ezinomdla, indlela yokuya okanye nantoni na endinokukunceda ngayo. Nangona kunjalo, siqhele ukuba sekhaya, ngoko ke uza kuba nam ukuze ndikucebise ngawo nawuphi na umcimbi endingakunceda kuwo.
Uya kuba nenombolo yam yomnxeba yobuqu ngayo nayiphi na imibuzo enokuthi ivele ngexesha lokuhlala kwakho, kunye nokukunika iingcebiso ngendawo yokutya, iindawo ezinomdla, indlela y…